Xerada Dhagaxley oo Lagu Dhaawacay 5 ka Tirsan Kooxda Jwxo-shiil – Rasaasa News
Xerada Dhagaxley oo Lagu Dhaawacay 5 ka Tirsan Kooxda Jwxo-shiil
Aug 12, 2010 ethiopia, Jwxo-shiil, Ogaden, ONLF, Xerada Dhagaxley oo Lagu Dhaawacay 5 ka Tirsan Kooxda Jwxo-shiil
Garrissa- [rasaas Aug 12, 2010] – Wararka ka imanaya Xerada qaxootiga ee dhagaxley ayaa sheegaya in xalay saqdii dhex uu ka dhacay xerada werar gaadmo ah oo ay qaadeen kooxda Jwxo-shiil, werarkaas oo lagu qaaday dhalinyaro ka tirsan cwxo ee ku sugan xeradaas.
Sida ay wararku sheegayaan waxaa werarka soo abaabulay masuuliyiinta kooxda Jwxo-shiil, ee jooga xeryaha Qaxootiga ee Dhadhaab. Waxay doonaysay kooxda Jwxo-shiil in werarka ay ku waxyeeleeyaan dhalinyaro ka tirsan cwxo, oo halkaas isku uruursaday doonayana in ay galaan gudaha Ogadeeniya si ay uga qayb galaan nabad la sugayo in ay ka dhacdo dhulka Somalida Ogadeeniya ee ay qayb ka tahay Jabhada ONLF.
Wearaka ayaa dhacay saqdii dhexe iyada oo kooxda Jwxo-shiil, ay islahaayeen dad yar ayaa jooga guriga ay weerarka ku qaadeen. Kooxda werarka soo qaaday ayaa halkaas ugu tagtay dad ka badan intii ay filayeen taas oo keentay in dagaalkii ay soo qaadeen laggag guulaysto.
Kooxda Jwxo-shiil ayaa laga dhaacay 5 ruux oo ay qaar ka mid ah aad u il-daran yihiin. Dadka wax weraray iyo kuwa la weeraray ayaa hal beel ah, waxaana khidadan ka shaqeeyey Cali dheere, oo ka shaynaya baryahan in uu iska hor keeno beesha uu Jwxo-shiil, is leeyahay waxay kaa hor keentay dadweynaha Somalida Ogadeeniya.
Kooxda Jwxo-shiil, ayaa iyadu waxaa ay adeegsataa gacan ka hadal si ay u cabsi galiso dadweynaha Somalida Ogadeeniya. Arintan gacan ka hadalka ah ayey kooxda Jwxo-shiil, hore dhibaato ugu gaysatay dadweyne badan gudaha iyo dibadaba, waana arimaha ay hore ugu soo dhiibtay xukuumada Eritrea.
Jwxo-shiil, ayaa waxaa uu aad u adeegsadaa beeshiisa, waxaana uu iska dhigaa ruux wax u qabanaya Jabhada ONLF, oo uu isagu dhacaankii ka meertay dhigayna meel xun.
Kooxda Jwxo-shiil, ee werarka soo qaaday ayaa waxaa ka mid ah Cabdiraxman Jwxo, oo isagu dhaawac ah. Wali manaan helin magacyada dhalinyarada dhaawaca ah, kolka ugu horaysa ee aan helana waanu idinla soo socodsiindoonaa.
Baanuyaal Caydhoobay Buugii Aabihii Buu Baadh-baadhaa
Hogaamiyaha Somali Galbeed Mudane Sheekh Ibrahin, oo Waraysi Siiyey BBC-da